Diseembar | 2016 | WEEJIDOW
Archive for Diseembar, 2016
Diseembar 31, 2016
WAR DEG DEG AH: TALIYE KU XIGEENKII MADAXTOOYADA SOOMALIYA OO LAGU DILAY GUDAHA MADAXTOOYADA SOOMAALIYA
Waxay faah faahin ka soo baxeysaa dil Taliye ku-xigeenka MADAXTOOYADA SOOMAALIYA maanta loogu gaystay Xarunta Madaxtooyada Somaliya dhexdeeda, ka dib markii uu khilaaf soo kala dhex galay askari ka tirsan Ilaalada Madaxtooyada.
Ilo wareedyo, ayaa WAAJIDPRESS u sheegay in Korneyl Cabdi Cabdulle Qoorgaab, oo ahaa Taliye Ku Xigeenkii Ciidanka Koofi Casta ee ka hawlgala Villa Somalia, loo dilay lacag dhan boqol lacagta Mareykanka.
ALLAHA U NAXARIISTO “Korneyl Cabdi Cabdulle Qoorgaab wuxuu ahaa Abaan Duulihii Ciidamada Koofi Casta ee Madaxtooyada, wuxuuna ahaa Taliye Ku Xigeenka Ciidamada.” Ayuu yiri Sarkaal Madaxtooyada ka tirsan oo u waramay WAAJIDPRESS.
Sarkaalkan oo diiday in magaciisa loo adeegsado Warbaahinta, ayaa yiri “Abaan Duulaha, ayaa waxaa dilay nin askari ah, sababtuna waxaa weeye shalay ayaa mushaarka loo qaybiyay Ciidamada Koofi Casta, askarigana kuma jirin askartii mushaarka la siiyay. Maanta ayuu soo maqlay in mushaaraadka si hoose loogu qaybiyay Ciidamada Koofi Casta oo uu ka tirsanaa, wuxuuna ku yiri mushaarkayga i sii, isagiina si toos ah ugu muu jawaabin. Boqol dollar ($100) ayuuna maanta u dhintay.”
Waxaa uu tilmaamay in mushkilad ay ka taagan tahay bixinta mushaaraadka Ciidamada Qalabka Sida Qaranka, isagoo intaa ku daray in markasta la musuq maasuqo mushaaraadka ciidamada.
“Arrinta mushaaraadka ciidamada murunka baa ka dhasha mar walba. Waa wax taagan, maxaa yeelay nin xukuma ciidan meel joogga ayaa Taliyaha Ciidamada ka soo saxiixaya in ciidanka uu mushaarka u qaybinayo, markuu ka so qaado Wasaaradda Maaliyadana, si hoose ayuu ugu qaybiyaa ciidan yar oo ka mid ah ciidanka uu xukumo. Qaab qabiil ha ugu qaybiyo ama ha ugu qaybiyo si is garasho ah. Inta badan ciidankaasi lacagaha waxaa loogu diraa teleefanadooda gacanta. Hadhowna waxaa loo sheegaa Madaxda Dowladda in la bixiyay mushaarkii.” Ayuu yiri Sarkaalkan.
Sarkaalkan, ayaa intaa raaciyay “Hadaba dhibaatada waxay ka jirtaa Madaxdii Qaranka oo aan wax hubin ah ku samaynin in mushaarkii ciidanka la gaarsiiyay iyo in kale. Taas ayaana u sahlaysa in musuq maasuq uu ku kaco Sarkaalkii xukumaayay ciidanka hoos-tagga.”
Hay’adaha ammaanka ee Magaalada Muqdisho, ayaa baadi-goob ugu jira askariga dilka gaystay, kaa oo duhurnimadii maanta ka baxsaday Villa Somalia, ka dib dilka Korneyl Qoorgaab.
Xildhibaanada oo ansaxiyay lacagaha laga doonayo musharaxiinta iyo Xildhibaanada la diiday oo la dhaariyay
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho, ayaa meelmariyay lacagaha laga doonayo musharaxiinta.
Xildhibaanada, ayaa ansaxiyay in musharaxiinta Madaxweynaha laga doonayo soddon kun oo lacagta Mareykanka ($30,000), halka musharaxiinta Guddoonka Baarlmaanka, ay iyaguna tahay in ay bixiyan shan iyo toban kun oo dollar ($15,000).
Dood, ayaa ka dhalatay ansaxinta lacagaha ay tahay in ay bixiyan musharaxiinta, inkastoo markii dambe loo codeeyay in cod loo qaado, iyadoona inta badan Xildhibaanada ay isla qaateen in musharaxiinta Madaxweynaha laga rabo soddon kun oo dollar, halka musharaxiinta Guddoonka Baarlamaanka, iyana laga doonayo shan iyo toban kun oo dollar.
Gudoomiyaha kmg ee Baarlamaanka, Cismaan Cilmi Boqore, ayaa ku dhawaaqay in 226 Xildhibaan, ay haa ugu codeysay, iyadoo 11 ay diiday, halka 2 kalana ay ka aamustay.
Gudoomiyaha, ayaa wuxuu sheegay in meelmarinta Xildhibaanada ay ansax tahay, musharax kastana laga doonayo in uu bixiyo lacagahaasi.
Dhanka kale Xarunta Golaha Shacabka, ayaa maanta lagu dhaariyay 17 Xildhibaan. Xildhibaanada la dhaariyay waxaa ku jira Maxamed Axmed Abtidoon iyo Muna Khaliif Sheekh Abu (Muna Kay), oo horey ay u laaleen Guddiga Xalinta Khilaafaadka.
Talaadadii, ayaa waxaa Magaalada Muqdisho lagu dhaariyay 281 Xildhibaan, iyadoo illaa iyo hadda Xildhibaanada la dhaariyay, ay wadartoodu noqonayso 298 Mudane, kana wada tirsan Labada Aqal.
Kuwaasoo loo haysto inay ka dambeeyeen faragalin lagu sameeyey doorashadii Maraykanka ka dhacday.
Diseembar 30, 2016
Xildhibaanada Baarlamaanka oo lagu wado in ay doortaan Guddoonka labada Aqa
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in berri oo Sabti ah ay yeeshaan kulankoodii 2aad ee kalfadhiga koowaad iyadoo kulankaasina ay shir guddoomin doonaan guddoomiyaasha kumeelgaarka ah ee ah kuwa ugu da’ada weyn labada gole.
Kulankaan ayaa laga yaabaa in laga soo saaro guddiga doorashada guddoomiyaha baalamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo weliba guddiga doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa la saadaalinayaa Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee labada Aqal in maalinta barrito ay soo doortaan Hogaankii Golaha, iyadoo ay jiraan shaqsiyaad isku soo taagay qabashada xilkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in kulamo kala duwan ay qaadanayaan Xildhibaanada Baarlamaanka cusub iyo shaqsiyaadka doonaya in ay noqdaan Xubno ka mid ah Guddoonka Baarlamaanka Soomnaaliya.
Waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in uu ugu cad cad yahay xildhibaan CabdiRashiid Xidig OO KA soo jeeda Beesha (OGAADEEN-DAAROOD), uu doonaayo xilkaasi.
Ugu dambeyn, Cabdirashiid ayaa la aaminsan yahay in uu taageero rasmi ah ka heysto Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo haatan ah Musharax Madaxweyne.
DAAWO SHAXDA: KHARASHKA XILDHIBAANADA LABADA AQAL – BISHII IYO SANADKIIBA
DAAWO: MAAMULKA KOONFUR GALBEED OO MAANTA MAGACAABEY GUDIGA ABAARAHA DEEGAANADA KOONFUR GALBEED
Diseembar 29, 2016
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Diseembar, 2016.